မြိတ်ဒေသထွက် တညင်းသီးများ အထွက်နှုန်း ကောင်းနေသော်လည်း ဝယ်လိုအား မရှိသည့်အတွက် ဈေးကွက်ပျ?? - Yangon Media Group
မြိတ်၊ မေ ၂၇
တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး မြိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့ နယ်များမှထွက်ရှိသော ရာသီပေါ် သီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်သည့် တညင်းသီးများ ယခုနှစ်တွင် အသီးထွက်နှုန်း ကောင်းသော်လည်း မြိတ်ဈေးကွက်အတွင်း ဝယ်လိုအားမရှိ၍ ဈေးကွက်ပျက်ကာ အရောင်းအဝယ်ဆိုးကြောင်း တညင်းသီးအဝယ်ဒိုင်များထံမှ သိရသည်။ မြိတ်ဒေသထွက် တညင်းသီးများမှာ ရာသီပေါ်ချိန်တွင် တစ်လုံး ငွေကျပ် ၇ဝ မှ ၈ဝ အထိ ပေါ်ဦး ပေါ်ဖျား ဈေးကောင်းရရှိခဲ့သော်လည်း ယခုလက်ရှိမှာ တစ်လုံးငွေ ငါးကျပ်မှ ရှစ်ကျပ်ခန့်သာ ဈေးကွက် ရှိနေသည့်အတွက် အရောင်းအဝယ်အေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
”ယခုနှစ်မှာ ရွာတိုင်းမှာ တညင်းသီးထွက်နေပေမယ့် အဝယ်ဒိုင်တွေ မရှိတော့ ဈေးကွက်လည်းပျက်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စာရင် ဒီနှစ်ကအခြေအနေတအားဆိုးရွားတယ်” ဟု မြိတ်ကမ်းနားလမ်းရှိ တညင်းသီးအဝယ်ဒိုင်တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဦးနောင်က ပြောကြားသည်။ မြိတ်ဒေသထွက်တညင်းသီးသည် ယခင်နှစ်များက ကျွန်းစုမြို့ နယ်ရှိကျေးရွာများမှ အများဆုံးထွက် ရှိပြီး ယခုနှစ်တွင် မြိတ်၊ ကျွန်းစု၊ ပုလောနှင့် တနင်္သာရီမြို့နယ်များ အတွင်းရှိကျေးရွာများ၌ တစ်ပြိုင် တည်းထွက်ရှိလာသောကြောင့် ဈေးများထိုးကျသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဝယ်ဒိုင်များထံမှ သိရသည်။
မြိတ်ခရိုင်ရှိ မြို့နယ်များအတွင်းရှိ ကျေးလက်ဒေသများတွင် မိမိတို့ပိုင်ဥယျာဉ်ခြံများ၌ တညင်းသီးပင်များကို ကြားသီးနှံများအ ဖြစ် ကွမ်းသီး၊ ရော်ဘာပင်နှင့် အခြား နှစ်ရှည်ပင်များအတွင်း၌ အပိုဝင် ငွေများရရှိရန် ထည့်သွင်းစိုက်ပျိုးသည့်အပြင် တောထဲတွင်း၌လည်း သဘာဝအလျောက် ပေါက်ရောက်လျက်ရှိပြီး နှစ်စဉ် ဧပြီလနှင့် မေလများတွင် အများဆုံးထွက်ရှိလေ့ ရှိကြောင်းသိရသည်။
တောင်သူများအား စိုက်ပျိုးစရိတ် ထုတ်ချေးရာတွင် ပုံစံ(၇) မူရင်း အပ်နှံရမည် ဆိုသည့်အတွက် တောင်
ပြောင်းလဲကျင့်သုံးမည့် မှတ်ပုံတင် e-ID စနစ်အပေါ် ပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၅ဝ ကျေ?
ရေးမြို့တွင် တည်ထားကိုးကွယ်မည့် ထိုင်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လေးဆူကို မန္တလေးမြို့မှ ရေြး?
ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု သံတမန်အဖြစ် ဒိန်းဂျွန်ဆင်၏ သမီး စိုင်မွန် ခန့်အပ်ခံရ